Spotify डुओ, Spotify प्रीमियम सदस्यता दुई | आईफोन समाचार
Spotify डुओ, Spotify प्रीमियम सदस्यता दुई को लागी
Spotify तपाईंको प्रीमियम संगीत सदस्यता पहुँच गर्न असंख्य तरिकाहरू प्रदान गर्दछ। परम्परागत सदस्यता, विद्यार्थीहरूको लागि, परिवारको लागि, अन्य सेवाहरू जस्तै प्लेस्टेशन वा हुलुको साथ कम्बोज, र अपरेटरहरूको साथ प्रस्ताव गर्दछ।
तर अब, केहि देशहरूमा दुई व्यक्तिको लागि सदस्यता प्रस्ताव गर्न शुरू भयो, कम मूल्यमा।
Spotify सेवा, प्रीमियम डुओ, सँगै बस्ने जोडीहरूको लागि Spotify प्रीमियममा दुई खाताहरू ल्याउन चाहन्छ र एकै परिवारमा बच्चा वा अन्य परिवार छैन जससँग Spotify प्रीमियम परिवारले प्रस्ताव गरेको छ खाताहरू साझा गर्नका लागि।
अवश्य पनि, त्यहाँ दुई खाता र छ वटा होइन, मूल्य पनि कम छ। यस समयमा, यो सदस्यता केवल पोल्याण्ड, कोलम्बिया, डेनमार्क, चिली र आयरल्यान्डमा मात्र देखिएको छ। यूरो मा मूल्य आयरल्यान्डमा यो प्रति महिना € १२.12,49। छ (याद गर्नुहोस् कि Spotify प्रीमियम परिवार प्रति महिना € १..14,99 छ र एक खाताको लागि सामान्य एक, month 9,99 .XNUMX प्रति महिना)।
एक रोचक प्रस्ताव र हामी यो कसरी अन्य देशहरू र अन्य सेवाहरूमा विस्तार हुन्छ भनेर हेर्न आशा राख्छौं। हुनसक्छ एप्पल संगीतले यस्तै प्रस्ताव ल्याउँदछ यदि स्पोटिफाइले अन्तत: सम्पूर्ण विश्वमा लिन्छ।
Spotify प्रीमियम डुओ को एक थपको रूपमा, स्पोटिफाईले डुओ मिक्स प्रस्तुत गरेको छ। एक स्वचालित रूपमा उत्पन्न प्लेलिस्ट जुन तपाइँ र तपाइँको साथीले मनपराउने संगीत संयोजन गर्दछ जब तपाईं प्रिमियम डुओ प्रयोग गर्नुहुन्छ। कारमा कसले संगीत बजाउँछ भन्नेमा झगडा नगर्न रोचक एक नवीनता।
साथै, मोबाइल अनुप्रयोगमा हामी ताल (उत्साह) लाई बढाउन सक्छौं वा यस प्लेलिस्टको लागि Calmer ताल (Chill) राख्न सक्छौं। र त्यसैले बजाउने गीतहरू क्षण फिट गर्न परिवर्तन हुनेछ।
निस्सन्देह, हामी पहिले नै कसैसँग गर्न सक्दछौं, हामी दुई प्रीमियम डुओ सदस्यहरू बीच एक सहयोगी प्लेलिस्ट सिर्जना गर्न सक्छौं र गीतहरू थप गर्नुहोस् जुन हामी म्यानुअली चाहन्छौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » धेरै » Spotify डुओ, Spotify प्रीमियम सदस्यता दुई को लागी
प्लेस्टेशनको साथ कम्बो ?? यसले के समावेश गर्दछ ??
Keko लाई जवाफ दिनुहोस्
नयाँ आईप्याड एयर, सबैको लागि आईप्याड
कसरी तपाइँको अमेजन एलेक्सा मार्फत कलहरू गर्ने